June 2020 - Online Hartha
နောက် (၂) ရက်အတွင်း မိုးပိုလာမည့်ဒေသများ မိုး ဇလ ထုတ်ပြန် (ဇွန်လ (၃၀)ရက်နေ့ ည(၇:၀၀)နာရီအချိန် မိုးဇလ တိုင်းထွာချက်)
June 30, 2020 by Online Hartha
နေ့စဉ် မိုးလေဝသ သတင်း ( ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ၊ ဇွန်လ ( ၃၀ )ရက်နေ့ ည ( ၇:၀၀ )နာရီ အချိန် ထုတ်ပြန်ချက်) ဘင်္ဂလား ပင်လယ်အော်အ‌ခြေအနေ။ ကပ္ပလီပင်လယ်ပြင်နှင့် ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ပို င်း တို့တွင် မုတ်သုံလေ အားအသင့်အတင့် မှ အားကောင်းနေပြီး၊ ကျန်ဘင်္ဂလား ပင်လယ်အော်တွင် မုတ်သုံလေ အားနည်းနေ ပါသည် ။ နောက် ၂ ရက်အတွင်း မိုးပိုလာမည့်ဒေသများ မိုးဇလ ထုတ်ပြန် (ဇွန်လ (၃၀)ရက်နေ့ ည(၇:၀၀)နာရီအချိန် မိုးဇလ တိုင်းထွာချက်) မနက်ဖြန်မွန်းတည့်ချိန်အထိခန့်မှန်းချက်။ နေပြည်တော်နှင့် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတို့တွင် နေရာကွက်ကျား ၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး အောက်ပိုင်း၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနှင့် ကယားပြည်နယ် တို့တွင် နေရာကျဲကျဲ၊ … Read more
ပြည်သူချစ်အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ သရုပ်ဆောင်နေမင်းကိုတော့ပရိသတ်ကြီးလည်းသိပြီးသားဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။ လက်ရှိမှာတော့ နေမင်းကအနုပညာအလုပ်တွေကိုခဏတာရပ်နားထားပြီး စိတ်တွေအရမ်းမွမ်းကျပ်နေလို့ သူ့ရဲ့မြို့လေးဖြစ်တဲ့သက္ကလမြို့လေးကိုအလည်ရောက်ရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ တောဓလေ့အတိုင်းလယ်ကွင်းတွေနဲ့သာယာလှပတဲ့ သက္ကလမြို့လေးကိုနေမင်းတို့မင်းသားစုလိုက်ရောက်ရှိနေပြီး အေးအေးချမ်းချမ်းအနားယူနေတာဖြစ်ပါတယ်။ နေမင်းကတော့သူ့ရဲ့မြို့လေးတိုးတက်ဖို့အတွက်လည်း တစ်ထောင့်တစ်နေရာကနေတတ်နိုင်သလောက်ထောက်ပံ့လှူဒါန်းမှုတွေကိုပြုလုပ်ပေးနေသူတစ်ယောက်ပါ။ လက်ရှိမှာလည်း ရွာလမ်းလေးကောင်းဖို့အတွက်သူကိုယ်တိုင်ပြုပြင်ပေးနေတဲ့အကြောင်း ပုံရိပ်လေးတွေနဲ့အတူသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာဖော်ပြထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအကြောင်းလေးကိုတော့ “လမ်းပြင်နေသည်”ဆိုပြီးဖော်ပြထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးအတွက် ကိုယ်တိုင်လမ်းပြင်နေတဲ့နေမင်းတို့ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကို သာဓုခေါ်လို့ရအောင်ပြန်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်..။ credit ရုပ်သံကို အောက်ဆုံးတွင် ဖော်ပြထားပါသည်။ unicode ပွညျသူခဈြအနုပညာရှငျတဈယောကျဖွဈတဲ့ သရုပျဆောငျနမေငျးကိုတော့ပရိသတျကွီးလညျးသိပွီးသားဖွဈမယျထငျပါတယျ။ လကျရှိမှာတော့ နမေငျးကအနုပညာအလုပျတှကေိုခဏတာရပျနားထားပွီး စိတျတှအေရမျးမှမျးကပျြနလေို့ သူ့ရဲ့မွို့လေးဖွဈတဲ့သက်ကလမွို့လေးကိုအလညျရောကျရှိနတေယျလို့သိရပါတယျ။ တောဓလအေ့တိုငျးလယျကှငျးတှနေဲ့သာယာလှပတဲ့ သက်ကလမွို့လေးကိုနမေငျးတို့မငျးသားစုလိုကျရောကျရှိနပွေီး အေးအေးခမျြးခမျြးအနားယူနတောဖွဈပါတယျ။ နမေငျးကတော့သူ့ရဲ့မွို့လေးတိုးတကျဖို့အတှကျလညျး တဈထောငျ့တဈနရောကနတေတျနိုငျသလောကျထောကျပံ့လှူဒါနျးမှုတှကေိုပွုလုပျပေးနသေူတဈယောကျပါ။ လကျရှိမှာလညျး ရှာလမျးလေးကောငျးဖို့အတှကျသူကိုယျတိုငျပွုပွငျပေးနတေဲ့အကွောငျး ပုံရိပျလေးတှနေဲ့အတူသူ့ရဲ့လူမှုကှနျရကျမှာဖျောပွထားခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ အဲဒီအကွောငျးလေးကိုတော့ “လမျးပွငျနသေညျ”ဆိုပွီးဖျောပွထားခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ ပရိသတျကွီးအတှကျ ကိုယျတိုငျလမျးပွငျနတေဲ့နမေငျးတို့ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုငျလေးကို သာဓုချေါလို့ရအောငျပွနျဖျောပွပေးလိုကျပါတယျနျော..။ credit ရုပျသံကို အောကျဆုံးတှငျ ဖျောပွထားပါသညျ။
ကလေးကို လှုပ်ယမ်းတဲ့အခါ ကလေးငယ်ရဲ့ ဦးနှောက် ဘာဖြစ်သွားနိုင်လည်း Video ဖိုင် ကြည့်ရန် …
ကလေးကိုလှုပ်ယမ်းတဲ့အခါ ကလေးငယ်ရဲ့ ဦးနှောက်ဘာဖြစ်သွားနိုင်လည်း Video ဖိုင် ကြည့်ရန် … ကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ မိဘတစ်ယောက်ဖြစ်ရတာဟာ တော်တော် အပင်ပန်းခံရတဲ့ အလုပ်ဖြစ်ပြီး ကလေးငယ်တွေရဲ့ ငိုသံတွေကြားက မိမိကလေးငယ် ဘာဖြစ်နေတာလဲဆိုတာ သိအောင်ကြိုးစားရတဲ့ လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက် တော်တော်ပညာသားပါတဲ့ လုပ်ငန်းတစ်ရပ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကလေးငယ်ကို ထိန်းကျောင်းရင်း ကလေးငယ်က အငိုမတိတ်တဲ့အခါကလေးကို ကိုင်ဆောင့်မိချင်စိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ် ခါယမ်းလိုက်ပစ်ချင်စိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ် တစ်ခါတစ်ရံမှာ စက္ကန့် အနည်းငယ်ပေါ်ပေါက်လာတတ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီလို ဒေါသ စက္ကန့် အနည်းငယ်ထွက်မိလို့ စိတ်လိုက်မာန်ပါလုပ်မိရင် ကလေးငယ်မှာ ခံစားရမဲ့ ဆိုးကျိုးတွေကို အင်္ဂလန်အမျိုးသား ကျန်းမာရေးအဖွဲ့နဲ့ NHS (National Health Service) နဲ့ အမေရိကန်နိုင်ငံ မင်နီဆိုတာပြည်နယ် ရိုချက်စတာ မြို့ရှိ (Rochester) Mayo Clinic တို့ကဖော်ပြခဲ့ပြီး ကလေးငယ်လေးယောက်မှာ … Read more
ချစ်သူအတွက် သိပ်ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ ယောင်္ကျားလေးတွေရဲ့ အပြုအမူ(၁၅)မျိုး
၁။ လေးတဲ့ပစ္စည်းတွေကို ကူမပေးခြင်း ၂။ လမ်းလျှောက်ရင် မိန်းမလေးတွေနဲ့ အတူတူ ဖြေးဖြေးလျှောက်ပေးခြင်း ၃။ ကားလမ်းဘေးမှာလျှောက်ရင်လည်း ကားလာတဲ့ဘက်မှာ သူကနေပေး ခြင်း ၄။ အိမ်အထိလိုက်ပို့ပေးခြင်း ၅။ မထင်မှတ်ပဲ လက်ဆောင် ပစ္စည်းလေးကို ပေးခြင်း ၆။ သူစားချင်တဲ့ စားသောက်ဆိုင်ကို လိုက်ထိုင်ပေးခြင်း ၇။ သူသွားချင်တဲ့ ဆိုင်တွေကို တနေကုန် လိုက်ပေးနိုင်ခြင်း ၈။ သူပြောတဲ့ဖုန်းတွေကို ဖုန်းခအကုန်ခံပြီး နားထောင်ပေးနိုင်ခြင်း ၉။ သူ့ရဲ့စိတ်အပြောင်းအလဲကို သည်းခံပြီး အလိုက်သင့်နေနိုင်ခြင်း ၁၀။ သူသွားချင်သော ဗေဒင်ဆရာဆီကိုလည်း မလိုက်ချင်လိုက်ချင်နဲ့သွားနိုင်ခြင်း ၁၁။ သူချက်ကျွေးတဲ့ဟင်းက သိပ်အဆင်မပြေလဲ စားလို့ကောင်းတယ်လို့ ပြောနိုင်ခြင်း ၁၂။ ကလေးဆိုးဆိုးတဲ့အခါ သည်းခံနိုင်ခြင်း ၁၃။ သူဝတ်တဲ့အင်္ကျီလေးတွေအားလုံးလှတယ်လို့ ပြောနိုင်ခြင်း ၁၄။ သူဆံပင်ညှပ်ပြီးရင် လှသထက်လှ၊ … Read more
မိန်းကလေးရယ်လို့ဖြစ်လာရင်တော့အသက်ကြီးလို့သွေးမဆုံးခင်အထိ လစဉ် သွေးဆင်းခြင်းကို ကြုံရမှာ ဓမ္မတာပါပဲ(ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်က လွဲရင်ပေါ့) ။ ဒီလိုပုံမှန်ရာသီသွေးဆင်းတာကမဆန်းပင်မဲ့တစ်ချို့တွေကတော့ ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ စိုးရိမ်စရာ ဓမ္မတာလာခြင်းတွေကိုကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ ဘယ်လိုအခြေနေတွေက ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့စိုးရိမ်စရာ ရာသီလာခြင်းတွေလည်းဆိုတာ ပျိုမေတို့သိစေဖို့ အနည်းငယ်ဝေမျှလိုက်ပါတယ်… (၁) ပုံမှန်မလာတဲ့ရာသီသွေး တစ်လတစ်ခါပုံမှန်လာရမယ်ဆိုတာ ဓမ္မတာပါပဲ။ ဒီလိုမှမဟုတ်ပဲ သင့်ရဲ့ ဓမ္မတာဟာ နှစ်လမှတစ်ခါလောက်လာတာမျိုး သုံးလတစ်ကြိမ်လောက်မှတစ်ခါဆင်းတာမျိုး၊ ပုံမှန်လတိုင်းလာနေပင်မဲ့လည်းတစ်ရက်တည်းနဲ့တင် ပြီးသွားတာမျိုးဆိုရင်တော့ သင့်ရဲ့သားအိမ်ကို စစ်ဆေးကြည့်ဖို့တော့လိုပါပြီ။ ချက်ချင်းကြီးစိုးရိမ်ဖွယ်ရှိတဲ့အခြေနေမျိုးမဟုတ်ပင်မဲ့ သိပ်ကောင်းတဲ့လက္ခဏာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ (၂) အရောင်ညိုမဲညစ်နေသောရာသီသွေး ရာသီသွေးဟာ ပုံမှန်သွေးအရောင်မျိုးမဟုတ်ပဲ ညိုညစ်တဲ့ဘက်ကိုသွားနေပြီဆိုရင်တော့ သတိထားသင့်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ရာသီသွေးမှာ ပန်းဆီရောင်(သို့) အနီရောင်ဘက်ကိုသွားနေမှသာ ပုံမှန်ဖြစ်ပြီး အညိုကတော့ သွေးပုပ်သွေးညစ်လို့ယူဆလို့ရပြီးသင့်ရဲ့သားအိမ်ထဲမှာ ရောဂါတစ်ခုခုဖြစ်နေတာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေတော့ ဂရုစိုက်စရာမလိုပင်မဲ့ အမြဲတမ်းညိုညစ်ညစ်တွေပဲဆင်းနေရင်တော့သတိထားတာအကောင်းဆုံးပါပဲ။ (၃) ရာသီလာချိန်မှာခေါင်းမူးပြီး သွေးအားနည်းတဲ့အခြေအနေ ရာသီလာချိန်မှာခေါင်းမူးပြီး သွေးပေါင်ကျတာမျိုး၊ သွေးအရမ်းဆင်းပြီး သွေးအားနည်းတာမျိုး ၊ … Read more
ဒီအဖြစ်အပျက်ကတော့ တကယ့်ကိုဝမ်းနည်းကြေကွဲဖွယ်ကောင်းလွန်းလှပါတယ် ။ ဖြစ်စဉ်ကတော့ ဘန်ကောက်မြို့မြောက်ဖက် Pathum Thani ပြည်နယ်မှာ နေထိုင်လျက်ရှိတဲ့ နေအိမ်တစ်ခုမှ အနည်ဆုံး 6လခန့်အသက်သေဆုံး သွားခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ အမျိုးသမီးရဲ့ ရုပ်အလောင်းကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ကြောင်း ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့မှ သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ် ။ အဆိုပါ ရုပ်အလောင်းကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ဟာ အိမ်မက်တစ်ခုနဲ့စတင်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက် ပို၍ထူးခြားဆန်းကြယ်နေကြောင်းလည်း သိရှိရပါတယ် ။ အသက် 71 နှစ်အရွယ် Boonlong Boonplum အမည်ရှိတဲ့ အဆိုပါရုပ်အလောင်းရဲ့ ဖခင်ဖြစ်သူဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ June 15 ရက်နေ့က သူ၏သေဆုံးသွားခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ဇနီးသည် နှင့် အသက် 46 နှစ်အရွယ် Thiphaphat phaksuk အမည်ရှိတဲ့ သူ၏သမီးဖြစ်သူတို့ဟာ သူ့အားလာရောက်လည်ပတ်တယ်ဆိုပြီး အိမ်မက်မက်ခဲ့ပါတယ် ။ ထို့နောက် အိပ်ယာမှနှိုးထလာခဲ့ချိန်မှာတော့ စိတ်ထဲတွင်တစ်ခုခုဖြစ်နေပြီဟု ထင်မှတ်နေခဲ့ပြီးနောက် သမီးဖြစ်သူကိုသွားရောက်လည်ပတ်ဖို့ … Read more
ဒီကောင်မလေးကိုရောသိကြလား … !?! … ။
ဒီကောင်မလေးကိုရောသိကြလား … !?! … ။ သူ့သေဆုံးမှု့အတွက်ကြတော့ရော ဘာလို့ “RIP…” မလုပ်ပေးကြတာလဲ … !?! … ။ မတရားသေဆုံးရပြီး ဘာလို့ မဝန်းရံကြတာလဲ … !?! … ။ သတ်သေတာမျိုးမဟုတ်ဘဲ ယုတ်မာမှု့ကြောင့်သေတဲ့သူမအတွက်ရော စိတ်မကောင်းမဖြစ်ကြဘူးလား … !?! … ။ မြန်မာတွေရဲ့စိတ်ဓာတ် တစ်ကယ်လေးစားတယ် … ။ သူ့ဘာသာသတ်သေတဲ့ သူကျ ဝိုင်းသနားနေလိုက်ကြ … ။ “SHARE…” ပြီး “RIP…” လုပ်ပေးလိုက်ကြ … ။ ဘာလို့လဲ … !?! … ။ ယောက်ျားထုကြီးက အစ သူများသေတဲ့ “POST…” အောက်သွားပြီး သူ့မှသေရလားတို့ဘာတို့နဲ့ … ။ … Read more
အချစ်စစ်ဆိုတာ ရှားပါးတယ်။ တကယ့်အချစ်စစ်ကို တွေ့ပြီဆိုရင်လည်း မျှော်လင့်ချက်တွေ ပျော်ရွှင်မှုတွေနဲ့ ပြည့်နှက်လာပါတော့တယ်။ အချစ်စစ်က လူတွေကို ပန်းရောင်တိမ်တွေပေါ်မှာ မျော်နေသလိုခံစားရအောင် လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိပြီး အတွေးပေါင်းများစွာနဲ့ တစ်ညလုံး နိုးကြားနေစေနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မိမိချစ်တဲ့သူနဲ့တွေ့တိုင်းလည်း တစ်ဘဝလုံး ပေါင်းဖက်ရမယ်လို့ ယုံကြည်ထားလို့မရပါတယ်။ တစ်ဘဝလုံးစာအတွက် ရည်ရွယ်ထားတယ်ဆိုရင် ချစ်တယ်ဆိုတာထက် ပိုတဲ့ပေးဆပ်မှုတွေ နာကျင်မှုတွေကို ခံစားနိုင်ရပါမယ်။ ဒီနေ့ kwee ပြောပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ အချစ်စစ်နဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာ ဖြစ်ပေါ်လာတတ်တဲ့ အရာတွေအကြောင်းပါပဲ။ တစ်ယောက်စိတ်ကို တစ်ယောက်က နားလည်လာနိုင်မယ် လေ့လာမှုတွေအရ အချိန်အကြာကြီး ဖြတ်သန်းခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ စုံတွဲတွေဟာ တစ်ယောက်ရဲ့ ခံစားချက်၊ အတွေးတွေကို တစ်ယောက်က နားလည်နိုင်ကြတယ်လို့ ဆိုထားပါတယ်။ ဒါဟာ လူတစ်ယောက်ကို သိတယ်ဆိုတာထက် အများကြီးပိုပါတယ်။ စကားမပြောဘဲ တိတ်ဆိက်နေရင်တောင် တစ်ယောက်ဘာဖြစ်ချင်နေလဲဆိုတာကို နောက်တစ်ယောက်က သိနေတတ်ပါတယ်။ အနာဂက်အတွက် … Read more
အမြန်လမ်းမှာ ကားဘီးပေါက်ခဲ့ပေမယ့် ကံကောင်းခဲ့တဲ့ သရုပ်ဆောင်ခင်သဇင်
အမြန်လမ်းမှာ ကားဘီးပေါက်ခဲ့ပေမယ့် ကံကောင်းခဲ့တဲ့ သရုပ်ဆောင်ခင်သဇင် မြန်မာပရိသတ်တွေရဲ့အချစ်တော် မော်ဒယ်လ်မင်းသမီးချောလေးတွေထဲမှာတော့ ခင်သဇင်လည်း အပါအဝင်ပါ။ ခင်သဇင်ကတော့ အမိုက်စားဘော်ဒီကိုပိုင်ဆိုင်ထားသလို သရုပ်ဆောင်ကောင်းတဲ့သူတစ်ယောက်လို့လည်း ပရိသတ်တွေကလက်ခံအားပေးကြတာပါ။ ခင်သဇင်ကတော့ မန္တလေး ရန်ကုန်ကားလမ်းကြီးမှာ ကားဘီးပေါက်သွားတာကြောင့်အခက်တွေ့ခဲ့ပေမဲ့ ကူညီသူတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီအကြောင်းကို “မန္တလေး ရန်ကုန် အ မြန်လမ်းမှာ ကားဘီးပေါက်ပါတယ်… ကံကောင်းချင်တော့ မီးသတ်ရှေ့တည့်တည့်မှာ ပေါက်တာပါ အဲဒါနဲ့ မီးသတ်ထဲ ဝင်ပြီး အကူညီတောင်းတာ ပုံပါ မြင်တွေ့တိုင်း မီးသတ်က တာဝန်ရှိသူများ အားလုံး နီးပါး ထွက်လာပြီး ကိုယ်တိုင် ကားဘီး ကို လုပ်ပေးကြပါတယ်… ယခုလို ကူညီစိတ် အပြည့်ရှိတဲ့ ဗောဓိကုန်း မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝငိများ အားလုံးကို လေးစားစိတ်ဖြစ်မိပါတယ်…မြန်မာနိုင်ငံသား တစ်ဦး အနေနဲ့လည်း ဂုဏ်ယူမိပါတယ်.. ဘီး အပိုနဲ့ ဖြည်းဖြည်း မောင်းသွားဖို့ … Read more